पातर र कडगरको जोडी | मझेरी डट कम
पातर र कडगरको जोडी
editor — Fri, 03/23/2018 - 05:13
बाह्र बजेको चर्को घामले बाटो हिँड्नेलाई असिनपसिन पारेको छ । दुई जना चुइँकिने साइकलमा चढेका छन् । उत्तरतिर हाँकिँदै छन् । बाटाभरि विद्यार्थीहरू भेटिन्छन् । एक किसिमको गुन्जायमान वातावरण फेला पर्छ– ‘बाई, बाई सर ! बाई...।’ आफूले अभिवादन नफर्काएमा पाखे भइएला भन्ने त्रास छ, साइकल यात्रीहरूमा । उनीहरूका पनि ओठ खुल्छन्– ‘बाई, बाई स्टुडन्टस्.......बाई.......।’
दुवै यात्रु बोर्डिङ्गका शिक्षकहरू हुन् । दुवैमा युवा जोस छ, नयाँ रगत दगुरिरहेको छ तर नयाँ सोच उम्रन सकिरहेको छैन । दुवै आफू तालिम अप्राप्त काँचा, कलिला शिक्षक मानिन तयार छन् । तर उनीहरूका प्रिन्सिपल भने शिक्षकलाई शिक्षकका रूपमा हैन, एक रेलका यात्रुका रूपमा सम्झन्छन् । स्कुललाई रेल्वे स्टेशन सम्झन्छन् । उनी भन्ने गर्थे, “यात्री त रेल्वे स्टेशनमा कत्ति आउँछन् र जान्छन्, यस्तो क्रम निरन्तर चलिरहेकै हुन्छ ।”
जसले थोरै तलव स्वीकार्यो र गोरु जोताइ जोतियो ऊ टीकाउ सर भयो । तर जसले यथोचित पारिश्रमिक लिएर श्रम बेच्न खोज्यो, उसका लागि छोटोभन्दा छोटो समय प्राप्त हुने भयो । बोर्डिङ्ग स्कुल शिक्षकका लागि एक किसिमको जेल हो । त्यहाँ भित्रिनु पनि वाध्यता हो । चाहेर पनि निस्कन नसक्नु अर्को बाध्यता हो । उनीहरूका बीचमा यस्तै यस्तै कुरा हुन्थे ।
साइकलको पछिल्तिर बस्ने गहुँगोरो थियो, सिकुटे थियो, फुँङ्ग उडेको मुहार थियो । जे बोल्थ्यो, त्यो गर्थ्यो । जे गर्थ्यो, त्यहीे बोल्थ्यो । हण्डर खान जानेको थियो । पीडा भोग्नेलाई नै सुखको आनन्दानुभूति प्राप्त हुने कुरामा ऊ विश्वस्त थियो । शारीरिकरूपमा ऊ पातलो भएकाले विद्यार्थीहरूले उसको नाम ‘पातर सर’ राखेका थिए ।
अर्को साइकल चालकचाहिँ खरो अङ्ग्रेजी बोल्थ्यो । सस्तो खालको सेतो भेष्ट लगाउँथ्यो । मंगोलियन आकृतिको रातोपीरो मुहारको थियो । थोरै बोल्थ्यो तर धेरै काम गर्थ्यो । सैनिकले आफ्नै आमाबाबु पनि नभनी कर्तव्य निर्वाह गरेझैँ ऊ पनि त्यस्तै कर्तव्य निर्वाहमा कटिबद्ध थियो । विद्यार्थीहरूले पढ्ने बेलामा पढेनन् भने दुई तीन पटक नैतिकरूपमा जिम्मेवार बनाउने प्रयत्न गर्थ्यो । त्यसो गर्दा पनि पढाइमा रूचि देखाएनन् भने र उसैलाई छक्याउने काम गरे भने ती विद्यार्थीहरूले उसको कडा दृष्टिभित्र फँस्नै पर्थ्यो । उनीहरूले नैतिकरूपमा गिर्नै पर्थ्यो । शारीरिक पीडाले नभए पनि मानसिक पीडाले रन्थनिनु पर्थ्यो । आँखाभरि आँसु पार्नै पर्थ्यो । हायलकायल हुनै पर्थ्यो । त्यसैले विद्यार्थीहरूले उनको नाम ‘कडगर सर’ राखेका थिए ।
पातर र कडगर दुवै सरको गाढा मित्रता थियो । तिनीहरूको एक मन थियो, शरीरमात्र दुई । सोच एक थियो, मस्तिष्क मात्र दुई । पेट एक थियो, मुख मात्र दुई । यसरी दुईभित्र एक भएर बाँचेका ती दुवै प्राणीको बोर्डिङ्ग स्कुले शिक्षण क्षेत्रमा नाम थियो । उनीहरू विद्यार्थीहरूलाई भन्ने गर्थे– ‘पैसा कसैलाई बढ्ता भएको छैन । तिमीहरूले उचालेका प्रत्येक पाइलामा अभिभावकहरूले आफ्नो पसिना लगानी गरेका छन् । उनीहरूले तिमीहरूमार्फत आ–आफ्ना सपनाहरू पूरा हुने देखेका हुन्छन् । हामी ती अभिभावकहरूको सपना कुल्चन चाहँदैनौँ । पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र राष्ट्रले निर्धारित गरेका उद्देश्य पूरा गर्न÷गराउन कटिबद्ध छौँ । अतः आफ्ना लागि पढ्ने गर । पढाइलाई वाध्यता नसम्झ । तिमीहरू हाँस्दै, नाच्दै, खेल्दै र गाउँदै सिक्न सक्छौँ । त्यसका लागि केवल चाख लिनुपर्छ । चिन्तनमनन गर्नुपर्छ । नजाने र नबुझेका ठाउँमा सिकाइको खोजयात्रामा निस्कन सक्नुपर्छ ।’
राजदेवी मन्दिरमा घण्टहरू बज्न सुरु हुनासाथ पातर जुरुक्क उठेर दैनिक कार्य गरी स्कुलका लागि तयार हुन्थ्यो । सडकमा उभिन्थ्यो र कडगरलाई कुर्थ्यो । घरिघरि आफ्नै सामर्थ्यले आर्जेको भुक्के घडी हेर्थ्यो । प्रार्थनाको समय ढिलो हुन लाग्यो भन्दै हतारिन्थ्यो । कडगर भने साइकल चुँइक्याउँदै आइपुग्थ्यो । ‘बुढियाले मुराई–तरकारी नखाईकन आउनै दिइनँ, ढिलो गर्दिई ।’, ऊ स्पष्टिकरण दिन्थ्यो । त्यस समय ऊ मलेठ गाउँमा विद्यार्थी पढाएर बस्थ्यो । उनका कुरा सुनेर पातर भने मुख मिठ्याउँथ्यो । कारण मुराई–तरकारी उसलाई पनि मन पर्थ्यो ।
साइकलको पछिल्तिर पातर बस्थ्यो । फेरि साइकल चुँइकिन थाल्थ्यो । बाटाभरि फेरि विद्यार्थीहरूकै लावालस्कर भेटिन्थ्यो । गुड मोर्निङ्ग सर...... गुड मोर्निङ्ग सर......, स्वर गुन्जिरहन्थ्यो । हरेक विद्यार्थीलाई अभिवादन फर्काउनु सम्भवै थिएन । केही विद्यार्थीहरूलाई भने गुड मोर्निङ्ग स्टुडन्टस्..... गुड मोर्निङ्ग .. भन्दिन्थे । केहीलाई भने टाउको हल्लाएर नै अभिवादन स्वीकार गरेको जनाउ दिन्थे ।
पछि गएर दुवै शिक्षकसँगै बस्न थाले । दुवै भिन्नाभिन्नै विषयका भएकाले टिउसन पढ्ने विद्यार्थीको भीड लाग्न थाल्यो । दुवै साथै विद्यालय पुग्थे । साथसाथै बाहिरिन्थे । उनीहरूको अटुट मित्रता देखेर अभिभावकहरू पनि छक्क पर्थे । यी दुवै स्कुलमा भएकाले स्कुलको शान र मान बढेको छ भन्थे । विद्यार्थीहरूलाई पढाउँदा भोग्नुपरेका अफ्ठ्याराहरू आपसमा छलफल गरेर टुङ्ग्याउँथे । कसैले कतै औँला ठड्याउने ठाउँ बाँकिरह्यो कि भनी सतर्क भएर पाइला अघि सार्थे ।
नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनासाथ प्रिन्सिपल राम्रा शिक्षकहरूका नजिक हुन्थे । उनीहरूलाई रिझाउनलाई हरसम्भव प्रयत्नमा रहन्थे । कडगर सबैको आँखाका नानी भइसकेको थियो । हुन त स्कुल प्रवेश गर्नेहरूको सुविधा मासिक नौ सयदेखि पन्ध्र सयसम्म थियो । उसबेला सहरमा एक जना मान्छेलाई सामान्यरूपले बाँच्न कम्तीमा मासिक सत्र सय लाग्थ्यो । कडगरको कडा विचार देखेर नै उनको तलव मासिक सोह्र सय तोकिएको थियो । उसको यस लोकप्रियतामा डाहा गर्ने अन्य पुराना शिक्षक मित्रहरूको कमी थिएन । ‘कडगर सर टिचर जकाँ नहि लागैत अछि मुदा निक टिचर अछि ।’ (कडगर सर शिक्षकजस्तो लाग्नुहुन्न तर असल शिक्षक हुनुहुन्छ ।) अभिभावहरूको आवाज सुनिन्थ्यो । यस्ता भनाइले पनि उसको उचाइ दिनानुदिन चुलिँदै थियो ।
ऊ बोर्डिङ्ग स्कुलको शिक्षक मात्र नभएर महेन्द्र विन्देश्वरी क्याम्पस, राजविराजमा पढ्ने विद्यार्थी पनि थियो । क्याम्पसको कक्षा छुटाउनु आफ्नो धर्म विपरित ठान्थ्यो । सारा अङ्ग्रेजी विभागमै उसको नाम थियो । त्यहाँ भने उनको नाम ‘मिष्टर एभिट’ थियो । सायद ऊ कुनै कुरामा गहिरिएर अध्ययन गर्ने र आफ्ना कुराहरू निर्धक्क राख्ने भएकाले ठट्यौलो पाराको नाम रोजिएको हुनसक्छ । शेक्सपियरका नाटक वा नाट्यकारिताका कुरा हुन् या ‘अ कम्पेनियन टु लिटेरेचर’का कुरा हुन्, उसका जिज्ञासा कडा खालका हुन्थे । जवाफ दिन नसकेर उसलाई पढाउने कतिपय शिक्षकहरू कहिलेकाहीँ विलखबन्दमा समेत पर्थे । गम्भीर समीक्षकले पर्गेल्न नसक्ने प्रसङ्गहरू उसले तेर्साएको हुन्थ्यो । कक्षामा प्रवेश गर्नासाथ सबैको ध्यान उसैतिर खिचिन्थ्यो । उसको उपस्थिति देखेमा प्राध्यापकहरू बढी सचेत भएर पढाउँथे ।
बोर्डिङ्ग स्कुलमा शिक्षकहरूको तलव बढाउने दिन आयो । उसको तलव भने सोह्र सयबाट बत्तीस सय पुर्याइयो । त्यस बेला प्रिन्सिपलले उसलाई भनेका थिए, ‘सर ! आजसम्म मैले अङ्ग्रेजी विषयको तपाईंजस्तो शिक्षक पाएको छैन । तलव पनि तपाईंलाई जस्तो कसैलाई दिएको छैन । सप्तरी जिल्लाकै श्रेष्ठ शिक्षकमध्ये एक ठानेर तपाईंलाई श्रेष्ठ दर्जामा राखेको छु ।’
शिक्षकको प्रशंसामा एक शब्द पनि राम्रो कुरा गर्न नरुचाउने प्रिन्सिपल उसबाट भने पग्लिएका देखिन्थे । नपग्लून् पनि कसरी ! उनलाई नै कतिपय मामलामा सिकाउने, बाटो देखाउने काम उसैबाट हुन्थ्यो । वार्तालापकै क्रममा प्रिन्सिपलको अन्तिम वाक्य थियो, ‘शतप्रतिशत तलब वृद्धि गरिदिएको छु । अर्को वर्ष भने केही प्रतिशत मात्र तलव वृद्धि हुने छ । आफ्नो कार्यमा यस्तै जागरुकता रहोस् ।’ नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनासाथ कतिपय शिक्षकलाई वास्ता गर्ने र कतिपयलाई वेवास्ता गर्ने प्रिन्सिपलको बानी पुरानै हो भन्ने सबैलाई थाहा थियो । त्यस वेला कडगर भने मौन रह्यो । यी शब्दहरू केवल उनीहरू दुई जनाले मात्र सुने । त्यहाँ अरू कोही साक्षी थिएनन् ।
सबै शिक्षकलाई व्यक्तिगतरूपमा बोलाएर तपाईंको यत्ति र उत्ति प्रतिशत तलव वृद्धि भयो भनिन्थ्यो । समय महंगिँदै थियो । टिउशन नपढाए सहरमा टिक्न गाह्रो हुन्थ्यो । प्रायः सबै शिक्षकहरू क्याम्पस पढ्ने विद्यार्थीहरू नै थिए । धेरै जसो चाहिँ घरबाट चामल ल्याउँथे । डेराभाडा समेत ल्याउँथे । स्कुलले दिएको तलवले केवल तरकारी किन्न र सामान्य पकेट खर्च गर्न मात्र पुग्थ्यो । नयाँ शिक्षक सबैको दिनचर्चा त्यसरी नै चल्थ्यो । तलव वृद्धि सम्बन्धमा प्रिन्सिपलका अगाडि बोल्न कोही सक्दैनथे । उनी जे जति तलव बढाउँथे, सबै जसो शिक्षकहरू त्यसैलाई स्वीकार्थे । दस प्रतिशतदेखि माथि सबैको तलव बढाएको छु भनेर मख्ख पार्थे । हजार रुपैयाँ तलव पाउने शिक्षकको तलव कत्ति नै बढ्थ्यो र ?
करिब छ वर्षपछि कडगरलाई रामजानकी माध्यमिक विद्यालय, गाईघाटले निजी स्रोतको शिक्षकका रूपमा काम गर्न बोलायो । सरकारी स्कुलमा पसिना बगाइयो, खुन सुकाइयो भने भोलिको लागि राम्रो हुने ठानेर ऊ त्यतातिर हानियो । एक महिना वित्ता नवित्तै उसले राम्रो लोकप्रियता कमायो । निजी विद्यालयमा पेलिएर काम गरेका त्यहाँ पेलिनु परेन । ज्यादै हल्का लाग्यो । उसलाई बरोबर आफू शिक्षक हुँ कि हैन भन्ने लागिरह्यो ।
ऊ बेलाबेलामा प्रधानाध्यापकहरूसँग भन्ने गर्थ्यो, “यसरी शैक्षिक स्तर कहाँ उक्सन्छ र ? यस्तो काइदाले शिक्षकको जिम्मेवारी कहाँ पूरा हुन्छ र ? विद्यार्थीका दैनिक आवश्यकता र यथोचित चाहना विपरित हिँड्दा अभिभावकको जिम्मेवारी कसरी पूरा भयो र ?” उसले त्यहाँ विद्यालय व्यवस्थापन, शिक्षक र अभिभावक तीनै थरिको कमजोरी देख्यो । सबै जसो शिक्षक शिक्षण क्षेत्रमा सुधारभन्दा पनि समय कटाउन र तलव भत्ता पकाउनमा नै मख्ख र मस्त भएको देख्यो । जसरी भए पनि कक्षा चढाउनु पर्थ्यो विद्यार्थीलाई । उनले पचहत्तर प्रतिशत विद्यार्थीलाई अनुत्तीर्ण पार्नुपर्ने अवस्था देखे । त्यहाँ भएकाहरू मध्ये अधिकांश स्थानीय शिक्षकहरू थिए । कसैका नानीहरू अनुत्तीर्ण भइहाले भने चौतर्फी गुनासाका स्वरहरू गुन्जिन्थे ।
“यी माष्टर सब सालभर कि करैछै ? हमरा बच्चाके फेल क्या देलकै । हम किताबकापी किन्देने चिए । सब दिना स्कुल भेज्ने चिए । आब हम कि करबै ?” (यी शिक्षकहरू सालभर के गर्छन् ? मेरो बच्चालाई फेल गरिदिए । मैले किताब–कापी किन्दिएको छु । सधैँ दिन स्कुल पठाइदिएको छु । अब म के गरूँ ?) अभिभावकहरूको स्वरले स्कुल थर्कन्थ्यो ।
बोर्डिङ्ग स्कुलमा यस खाले समस्या नदेखिने भने होइनन् तर विरलै । कडगरको मनले मनसँग कुरा गरिरह्यो । विचरा विद्यार्थीको मात्रै के दोष ? उनीहरू त अग्रजको लापरवाहीका सिकार भएका मात्रै हुन् । सबै शिक्षक वर्गमा अघोषित नीति थियो । परीक्षाको कापी जाँच्नुस् या नजाँच्नुस्, त्यसको त्यत्रो अर्थ छैन तर विद्यालयको रिपोर्टमा परीक्षा दिए जति सबै उत्तीर्ण हुनैपर्छ । यहाँ शिक्षक भएर हैन, तलव–भत्ता पाक्ने काम गरे पुग्ने रहेछ ।
देश अनुसारको भेषमा रहनुपर्छ भन्ने कुरा कडगरलाई पनि राम्ररी थाहा थियो । नेपालका शैक्षिक ऐन–कानून र नियमावलीहरूको पनि राम्रो अध्ययन थियो । जनताको नून खाएपछि काम गर्नैपर्छ भन्ने ठोस निष्कर्षमा उनी पुगेका थिए । एक्लो वृहस्पति बन्छु भन्ने भय उनमा रत्तिभर थिएन । त्यसैले उनी आफ्नो कर्तव्यको बाटोमा डटेर लागे, लागि नै रहे । कक्षाकोठामा अनुशासन कायम गर्न होस् या नियमित पार्न होस् वा पढाइप्रति अभिरूचि जगाउने काममा होस्, उसले हरसम्भव प्रयत्न गर्यो र विद्यार्थीमा आमूल परिवर्तन ल्याइदियो । उसले त्यहाँ मर्यादित ढङ्गले विद्यार्थीले पढ्नुपर्ने र शिक्षकले पढाउनुपर्ने प्रणालीको विकास गरिदियो ।
फलस्वरूप अरू शिक्षकहरूमा पनि धेरै परिवर्तन आयो । ऊ माथिल्ला कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई भन्ने गर्थ्यो– “हेर नानी हो ! म आफ्नै कुरा भनेर तिमीहरूलाई सोच विचार गरेर काम गर्न प्रेरित गर्दै छु । म अहिले एक माध्यमिक तहको अङ्ग्रेजी शिक्षकको रूपमा तिमीहरूको सामुमा छु । यहाँसम्म आइपुग्न मैले धेरै धेरै भेलहरू तर्नुपरेको छ । अनगिन्ती कराल पहाडहरू फोर्नुपरेको छ । कक्षा पाँचको विद्यार्थी छँदादेखि नै मैले अर्काको घरमा बसेर ससाना बच्चालाई पढाएर पढाइको खर्च बटुलेँ । टिउशनको मुख देखिनँ । अरूलाई पढाएर धेरै जान्ने भएँ । आफूले जानेको जति धेरैलाई बाँड्न सक्यो उत्ति जान्ने भइँदो रहेछ । मनमा भएका जिज्ञासाहरू शिक्षकसामु राखी समाधान पाउन सके पढाइप्रति अभिरूचि जाग्छ । मनमा अँध्यारो पाटो नरहनु भनेको उज्यालोको राज्य स्थापित हुनु हो । सोच ठूलो राखी कर्ममा डटेर लाग । आजको समयले भोलिको जीवन सुनिश्चित पार्छ । गफले संसार हाँक्छु भन्न छाडिदेओ । कर्मले संसारलाई रिझाउन सक्नुपर्छ । कर्मशील हातपाखुरीलाई संसारले चुम्छ । आज बाबुआमाको पाखुरीमा नाच्ने काम गरेमा त्यसकै असरले जीवनभर रुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । आजलाई मनमा राख र कर्ममा विश्वस्त बन ।”
उसले शिक्षण पेशालाई उत्तम पेशा ठानिसकेको थियो । म शिक्षक बनेर नै मान्छेको मनमन्दिरमा उज्यालो छर्न जन्मेको हुँ भन्न पनि उनी छाड्दैनथ्यो । स्थायी जागिरको बाउन्न साले परीक्षा दिएको थियो । अन्ठाउन्नको अन्तरबार्तामा समेत खरोसाथ प्रस्तुत भएको थियो । कतै प्राथमिक तहकै भए पनि शिक्षक बन्न सकिएला कि भन्ने झिनो आशा थियो । सप्तरी जिल्लामा शिक्षक बन्नु थियो । वैधानिक प्रकियामा अघिअघि भए पनि सोर्स, फोर्स, दानदक्षिणाका मामलामा पछि हुनुहुन्छ, आश गर्दै नगर्दा बेस हुन्छ, अमितजी भनेर नजिकका साथी र छरछिमेकीहरू उनलाई भन्दथे । जे देख्छन् अरूहरू त्यही भन्छन्, स्थायी शिक्षक बन्ने सपना देख्नु मेरो नाजायज सोच हैन भन्ने उसको ठहर थियो ।
पछिको कुरा जान्ने को छ र यहाँ ? नभन्दै रिजल्ट भयो । ऊ सफल भएछ । उसको पोष्टिङ्गको सवाललाई लिएर प्रधानाध्यापकहरूमा तँछाड् मछाड् भएछ । सबैको आआफ्नै खाले स्वार्थ थियो । ऊ थियो स्नातक डिग्री पाएको तालिम प्राप्त शिक्षक । कतिपय स्कुलमा माध्यमिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षक पाउनै गारो थियो । पछि थाहा पाइयो, उसले आफ्नै गाउँको स्कुलमा प्राथमिक शिक्षकको रूपमा माध्यमिक तहमा पढाउनुपर्ने भएछ । ठीकै छ भन्दै ऊ आफ्नै गाउँतिर हानियो । २७ असार, २०६१ को निर्णय बमोजिम भदौ १ गतेदेखि तलब भत्ता पाउने गरी उसले नियुक्ति पायो । अनवरतरूपमा ऊ विद्यार्थीहरू बीच उभिरहेको छ । तिनीहरूलाई नै हँसाउँदै र नचाउँदै पढाइ÷सिकाइ नै रहेको छ र लोकप्रियता कमाइ नै रहेको छ ।
बेलका नगरपालिका–२, गल्फडिया, उदयपुर,
मो. नं. ९८४२८२९२०६
अदालतबाट नै अन्याय पाएको छ
मेरो गीतका चार हरफ मात्र मझेरीलाई
सम्बन्ध सुत्र हाइकु पुस्तक सार्वजनिक
शुभजन्मोत्सव ( अष्टचिरंजीवि पूजा ) विधि
सनातन धार्मिक कार्यमा "गोदान"
जिन्दगीले सही बाटो
नयाँ वर्षको नौलो उमंग
मेरो कथा त्यो वृक्षलाई सोध
मझेरी भलाकुसारी, अंक २२ (पेशल आचार्य)
किन लाग्छ माया
मौलिकता भुल्दै तीजको गीत
बरै काठमान्डौ तिमी